Jeremia 5: 1-31
Jeremia 4 Jeremia 5 Jeremia 6
Miveziveze eny an-dàlamben'i Jerosalema hianareo, Ka izahao sy fantaro ary tadiavo ao an-kalalahana, Fa raha mba misy olona hitanareo, Izay manao ny marina sy mitady ny hitsiny, Dia havelako ny helok'i Jerosalema.
Ary na dia misy aza manao hoe: Raha velona koa Jehovah, Dia entiny mianian-tsy to izany.
Ka dia hoy izaho: Olona ambany ireto; Adala izy fa tsy mahalala ny làlan'i Jehovah, Na ny fitsipik'Andriamaniny;
Handeha ho any amin'ny lehibe aho lahy ka hiteny aminy; Fa ireny dia mahalala ny làlan'i Jehovah Sy ny fitsipik'Andriamaniny; Kanjo ireny koa aza dia samy efa nanapaka zioga Sy nanito fatorana.
Koa noho izany dia mamely azy ny liona avy any an-ala, Ary mandringana azy ny amboadia[lopa.] avy any an-efitra, Ny leoparda miandry hamely ny tanànany, Ka izay rehetra mivoaka avy ao dia viraviraina; Fa efa maro ny fahadisoany, Ary fantatra ny fiodinany.
Koa nahoana Aho no hamela ny helokao? Efa nahafoy ahy ny zanakao Ka efa nianiana tamin'izay tsy Andriamanitra; Efa nampianianiko[Na: efa novokisako.] izy, nefa nijangajanga ihany Ka nirohitra niditra tao an-tranon'ny vehivavy janga.
Tsy hovaliko va izy amin'izany? hoy Jehovah; Ary tsy hialako fo va ny firenena toy izany?
Miakara eo amin'ny màndany hianareo, ka mameleza, Nefa aza dia levonina avokoa izy; Esory ny sakeliny, Satria tsy an'i Jehovah izy.
Ny mpaminany dia hanjary rivotra, Ary tsy ao am-pony Ilay miteny;[Na: ny teny.] Eny, izany no hanjo azy.
Indro, efa hitondra firenena avy lavitra Aho hamely anareo, Ry taranak'Isiraely, hoy Jehovah, -- Dia firenena mateza hery, Firenena hatry ny ela, Firenena izay tsy fantatrao ny fiteniny, Ka tsy ho azonao izay lazainy.
Ary hohaniny ny vokatrao sy ny haninao, Hohaniny ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy, Hohaniny ny ondry aman-osinao sy ny ombinao, Hohaniny ny voalobokao sy ny aviavinao; Sady horavany amin'ny sabatra ny tanàna mimànda izay itokianao.
Nefa na dia amin'izany andro izany aza, hoy Jehovah, Tsy dia holevoniko avokoa hianareo.
Ary raha hoy izy:[Heb. hianareo] Nahoana Jehovah Andriamanitsika no dia nanao izany rehetra izany tamintsika? Dia hovalianao hoe: Toy ny nahafoizanareo Ahy sy ny nanompoanareo andriamani-kafa teo amin'ny taninareo No hanompoanareo ny firenen-kafa any amin'ny tany izay tsy anareo.
Izaho va tsy atahoranareo? hoy Jehovah; Tsy mangovitra va hianareo eo anatrehako, Izay nanao ny fasika ho fefin'ny ranomasina, Dia fetra mandrakizay tsy azony hihoarana? Ka na dia mitopatopa aza ny onjany, dia tsy mahavaky azy, Ary na dia mirohondrohona aza, dia tsy mahahoatra azy.
Toy ny tranom-borona feno vorona No mahafeno fitaka ny tranony; Ary noho izany dia tonga lehibe sy mpanan-karena izy.
Efa mihatavy izy ka mandimandina, Dia mihoa-pampana amin'ny fanaovan-dratsy; Tsy mety mitsara ady mba hahazoan'ny kamboty rariny izy, Ary ny adin'ny malahelo tsy mba tsarainy.
Zava-mahagaga sy mahatsiravina no atao eo amin'ny tany;
Ny mpaminany maminany lainga, Ny mpisorona manapaka araka izay atoron'ireny, Ary ny oloko mankasitraka izany; Koa hanao ahoana re hianareo any am-parany?